Firefox OS 2.0 rakibaadda Alcatel One Touch Fire oo leh Linux Mint | Laga soo bilaabo Linux
marianogaudix | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waad salaaman tihiin isticmaaleyaasha GNU / Linux, waxaan idiin sheegayaa inaan dhawaan iibsaday Alcatel One Touch Fire oo ah shaqo, taleefan hoose oo ii adeegta shaqadayda maalinlaha ah.
Iibsashadaydii waxaan go aansaday inaan baadho oo ogaado Firefox OS. Runta ayaa ah waxaan jeclaaday fududaanta nidaamka qalliinka iyo shaqadiisa si loo qabto howlaha aasaasiga ah ee taleefanka gacanta.
Telefoonka Alacatel One Touch Fire ayaa la socda Firefox OS 1.1, Waxa aan isla markiiba seegay waxay ahayd dejinta dhawaaqa, maxaa yeelay si fudud looma beddeli karo. Marka waxaan bilaabay inaan wax ka ogaado arrinta ku saabsan sida wax looga beddelo dhawaaqyada dhawaaqa gudaha Firefox OS 1.1. Raadinta macluumaadka Waxaan u imid gabagabada inay fiicnaan lahayd in la rakibo noocyada cusub ee FirefoxOS.
Waxay ahayd sidan oo kale akhrinta casharrada qaar iyo tijaabooyin iyo khaladaad aan ku guuleystay inaan rakibo Firefox 2.0-sii-deyn hore iyadoo lagu tababarayo rakibaadda Firefox 2.0 waxaa lagu sameeyaa 10 illaa 15 daqiiqo.
Aan u tagno nidaamka rakibaadda Firefox OS 2.0.
1 Shuruudaha hore:
2 Firefox OS 2.0 rakibaadda
Telefoonku ha ku jiro qaab horumariyaha.
Dooro sawirka aad doorbidayso oo ka soo dejiso https://vegnuxmod.wordpress.com/hamachi-alcatel-otf/
Buuggan waxaan ku isticmaali doonaa Firefox 2.0 hore u sii deyn "sawiro-hamachi-v2.0-20140629″ Xaaladeyda markaan soo dejiyay, aan furayay oo aan rakibay sawirka "images-hamachi-v2.0-20140623.tar".
Download faylkan: http://adf.ly/poV7o
Ka saar kaarkayaga SIM iyo SD-ka haddiiba ay dhacdo.
Hayso maktabadaha qalabka android-ka lagu rakibo rakibidda Android iyo Firefox OS:
Si loo rakibo maktabadaha ka baxa gegida aan dhigno:
sudo apt-hel rakib qalabka android-tools-adb
Firefox OS 2.0 rakibaadda
Waxaan fureynaa terminal waxaanan fulinaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan qornaa lambarkayaga sirta ah.
Kadib waxaan aadeynaa dariiqa hagaha sawirada
kiiskeyga sawirradu waxay ku jiraan galka shaqsiyan a Waxaan galiyay terminalkeyga:
Kadib waxaan ku qoreynaa xarunteena:
Faylka soonboot Waxay u muuqan doontaa cagaar muujinaysa inay diyaar u tahay fulinta.
Waxaan ka dhigeynaa faylka soo socda mid la fulin karo soonboot waxaan geynay boosteejada:
Kadibna waxaan daminnaa taleefanka wali ku xiran fiilada USB-ga ee kombuyuutarka. Mar alla markii aad damiso taleefanka gacantu wuu dib u bilaabanayaa, sidaa darteed waa inaanu galnaa Habka Bootloader. Si adag ayaan u qabannaa Codka (-) + On wadajir ah 5 ama 7 ilbidhiqsi mar aad dib u bilowdo taleefanka.
Si loo hubiyo inay shaqeyneyso waxaan geynay terminaalkeena:
$ ./fastboot qalabka
Ugu dambeyntiina waxaan mid mid ugu fulineynaa amarradeenna soo socda:
Waxaan kaa tagayaa buuggayga yar.
Hagaag halkan waxaan uga tagayaa nidaamka sida ugu fiican loogu sharaxay sawirrada
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Firefox OS 2.0 rakibaadda Alcatel One Touch Fire oo leh Linux Mint
Tan iyo markii aan iibsaday taleefankan sanad ka hor waxaan raadinayay hab aan ku cusbooneysiiyo, waxaana ugu fiican dhamaantiis, wuxuu ka socdaa Linux. Caawa waxaan isku dayi doonaa, inaan arko sida ay wax u socdaan.
Aad baad u mahadsan tahay saaxiib, haddii aad ka hesho rasmiga rasmiga ah Firefox OS sawirada shabakada rasmiga ah ee Mozilla, ii gudbi xogta, nasiib daro waan heli kari waayey.
Qiyaastii 10 daqiiqo waxaad karisaa rakibaadda Firefox OS.
Nasiib wacan, ii soo sheeg haddii aad dhibaato leedahay.
Haddayna dhibaato jirto, ama ma jecli rakibidda oo waxaan rabaa inaan ka soo kabsado rakibaadda hore, suurtagal ma tahay in la sameeyo keyd?
Waxaad siisaa amarrada, laakiin xitaa ma sharraxaysid waxay sameeyaan… taas oo ay sii dheertahay inaad ka tagto xiriiriye xayeysiis duulimaad wtf!…. Ma aqaan sida ay kuugu ogolaadeen inaad sidan ku dhajiso halkan xDDD
Waan ka xumahay, laakiin ma doonayo inaan qatar geliyo taleefankayga mana shaqeynayo ... Waxaan ugu baahanahay maalin ilaa maalin. Haa waxaan jeclaan lahaa inaan cusbooneysiiyo OS-ga, laakiin sidan ma ahan.
Nasiib ama /
Xidhiidhka leh Xayeysiiska Xayeysiiska maxaa yeelay dib uma aanan eegi karin, maxaa yeelay waxaan ka tifatiray qoraalkan xiriirinta wicitaanka. Si kastaba ha noqotee, haddii qof naxariis ku filan inuu ii sheego haddii marka Xayeysiiska Xayeysiiska uu u gudbiyo feylka si uu u soo dejiyo ay tahay khiyaano ama wax la mid ah, waan tafatiri doonaa Markaad ka saartey taas, ninyahow, maxaa kugu kacaya inaad gujiso Xayeysiiska Skip? XDD
ErunamoJAZZ waxay haysataa waqti ay kaga faallayso Linux.
Laakiin waxaad moodaa inaadan waqti uheynin Googled oo aad ka raadsato sawir Firefox OS rasmi ah internetka oo aad rakibto XDD.
Maadaama aad waqti u heysato inaad halkaan ka faallooto oo aad qiiqa u iibiso.
Sidoo kale ErunamoJAZZ waa inaad raadsataa qaab rasmi ah oo duug ah Firefox OS.
oo rakib, haddii aadan jeclayn Firefox 2.0 / 2.1.
Faylka iskuxirka xayeysiiska Daqsi, waa tusaale ahaan.
Taas awgeed, ka tag isku xidhka ugu weyn, halkaas oo aad kala soo bixi karto noocyo kala duwan oo ah Firefox OS
Markaad rakibatid nooc cusub oo ah Firefox OS ama mid hore, rakibidda ayaa qaabeysa taleefankaaga oo dhan.
Maya maya! Runtii waan ka xumahay haddii aan ka dhawaajiyo aflagaado ama wax uun, marna ujeedkaygu ma ahayn inaan isku dayo inaan baabi'iyo tan ama wax la mid ah, kaliya markaan arkay sida "nasashada" sharraxu u yahay, Aamusi kari maayo .. . ka fikir sida ay tahay: meelaha kale (qiyaasi malaha goobta caanka ah ee asalka Argentine ee aad ka heli karto wax walba iyo "mashiinada") sharaxaada waa qaabka "copy and paste", oo ay ka buuxaan sawiro, iyadoon loo eegin waxa amarrada ah samee ama maxaa loogu tala galay iyaga… shaqsi ahaan, maadaama aan ahay horumariye, waxaan u maleynayaa in waxaas oo kale ay yihiin caqli xumo… markaa had iyo jeer way fiican tahay in la aado akhrinta buuga halkii laga raadin lahaa sharaxaad khadka tooska ah.
Marka laga hadlayo googling, dabcan waan haystaa, laakiin halkii aan ka raadin lahaa sawirada halkaa ku yaal boggag aanan wax fikrad ah ka haynin (waan ka xumahay inaan ka shakisanahay, laakiin ma aaminsani binaries, kaliya src), waxaan doorbidi lahaa inaan sameeyo naftayda keydinta taleefankayga, iyo maadaama aad khibrad u leedahay arinta, waxaan filayay nooc jawaab ah oo ku saabsan ... xitaa haddii ay ahayd "ma aqaan."
Xiriirka xayeysiinta ... kaliya waxay iga xanaajineysaa ... xanaaqa jirka xD, iyo asal ahaan maxaa yeelay ma aqaano cidda ka faa'iideysan doonta royalty-ka xayeysiinta halkaas ka muuqata.
Waxaan si kal iyo laab ah uga raaligalinayaa dhawaqa xun ee ra'yigayga, ujeedadayda kaliya ee aan la leeyahay waa inaan u ogolaado blogku inuu ku halaabo maqaallo iyo sharraxaadyo in halkii fudud, ay yihiin dhexdhexaad.
Salaan ama /
Wuxuu ku sugayey inaad tusto keydkaaga taleefoonkaaga ka dibna aad ku soo rogto maqaal kuu gaar ah oo laga soo qaatay 'Linux' oo ku saabsan sida loo rakibo Firefox OS, markaa waan arki doonnaa cidda labadaa dhexdhexaad ka badan
Waxaad mooddaa inaad cusub tahay. Sababtoo ah waa inaan kuu sharraxaa amarrada fudud ee noocaas ah, sida gelitaanka habka superuser ("root") ama raadinta galka. Adeegsade kasta oo rakibiya qaybinta Gnu / Linux oo si fudud loogu akhriyayo maqaal, wuu garanayaa waxa loola jeedo:
Haddii aad ka hadasho TARINGA wax xiriir ah kuma lahan tan, waxaan casharradan u diyaariyey naftayda taas oo aan uga tagay xiriir soo degsiis ah, waxay umuuqataa inaadan arkin iskuxirka soo dejinta ee Mediafire.
Aad ayaad u xeel dheer tahay marianogaudix ... aad u “awood badan”
Ka jawaab TPM
sidii ayeeyday dhihi jirtay, ha cadeyn in ay madoobaato ...
Bixinta ikhtiyaar kale oo casriyeyn ah ayaa si weyn loogu mahadnaqay loona qiimeeyay. The Vegnux MOD ayaa ii shaqeeyay si aan uga cusbooneysiiyo Windows illaa nooca 2.1, illaa iyo hadda dhibaato la'aan. Waxay sidoo kale leedahay ".sh" in laga sameeyo Linux, laakiin si daacad ah ayaan u bilaabay hadda markaa runtii fikrad badan kama haysto mawduuca. Maalin wanaagsan.
Ku jawaab Ridercoss
Waxaan hadda rakibay RON-ka Firefox OS 2.1 oo ka socda vegnuxmod-ka ROM v2.1 20150328, in kasta oo ay tahay hordhac sii daynta ROM-ka ah, waxay si fiican uga shaqaysaa Alcatel One Touch Fire.
Waxay u egtahay mid xiiso leh, shalay waxaan ku rakibey CyanogenMod11 Samsung Galaxy s5630L, waxaanan ku guuleystey inaan kiniinkeyga ka shaqeeyo anigoon taaban VNC, isla amaradaas. Cashar wanaagsan.
Heer sare Hadda waxaan haystaa sabab dheeraad ah oo aan ku helo Firefox OS.
Laakiin bogga isku xira saaxiibkaa Mariano waxaa ku jira sawirro loogu talagalay moodeelka 'OT4012' oo keliya.
Ku soo jawaab rainerhg
Hoosta, jrlafaurie saaxiibkiis ah wuxuu faallooyinkiisa iigu reebay xiriiriye kale oo soo degsasho ah oo loogu talagalay Alcatel One Touch Fire, hubi xiriirka.
Waxaan kuu sheegayaa inaan ka bartay sida loo rakibo Firefox OS bogga rasmiga ah ee Mozilla aaladaha la jaan qaadi kara Firefox OS. On my Alcatel One Touch taasi uma aysan shaqeyn nasiib darro
Waa inaad soo dejiso sawirka aasaasiga ah ee v18D.zip hoosta, wuxuu sharxayaa sida loo rakibo sawirka
Firefox OS 2.0 xasilloon Haddii aad shaki qabto waan ku caawin doonaa
Waxaan idinkaga tagayaa casharka rasmiga ah ee Mozilla oo ay kujiraan sawiro rasmi ah.
hoosta waxaa ku yaal cashar ku saabsan sida loo rakibo
Waxaan doonayay inaan rakibo laakiin Mozilla ma taageerto Alcatel One Touch Fire.
Laakiin waan ogahay sida loo rakibo sawiradan xasilloon.
Si aad ula qabsato sawirradan waa inaad adigu u abuurtaa qalabkaaga aan la taageerin. Waan arki doonaa haddii aan heli karo casharro.
Cashar bixin heer sare ah! currada wanaagsan waad ku dhegtay.
PS Waa mobiil ku habboon shaqada haddii uu jabo ama wax aan waxyeello gaadhin ugu yaraan hal 200 oo euro ama ka badan.
Tababar fiican. Waan awooday inaan ku rakibo Firefox OS 2.0 aaladayda 'Alcatel OT Fire', laakiin markii aan ku daarayo nooca cusub, kaarka sim ma i aqoonsana: S
Ma ogtahay waxa dhibaatadu noqon karto? Haddii aanan rakibin rom kale oo aan isku dayo ...
Aniga sidoo kale dhibaato ayaa i haysatay waana inaan badalaa nooca hada waxaan haystaa 1.3, oo xasiloon, in kastoo 2.0 iyo goor dambe ay yihiin kuwo xasilloon, oo leh cayayaanka laga yaabo inaan la jeclayn, waxaan kugula talinayaa 1.3
Horey ayaan u xaliyay, waxaan rakibay nooca 2.1 oo ah mid weyn, marka laga reebo in batteriga uu sii socdo xitaa kayar.
Waxaan hadda ka rakibey Firefox OS 2.1 ROM-ka vegnuxmod, 2.1 ROM v20150328, in kasta oo ay tahay hordhac ROM ah, hadana sifiican ayey uga shaqeysaa Alcatel One Touch Fire.
Casharradu waa wanaagsan yihiin waana wanaagsan tahay in la ogaado in dad badani doorteen nidaamkan, kuwa aan fahmin waxaan u maleynayaa inay si aad ah u muuqatay waxaan halkaan uga tagayaa xiriiriyeyaal kale halkaasoo ay sidoo kale sawirrada ugu kariyaan taleefankan, waxaan rajeynayaa wuu kaa caawinayaa waxaan kuu sheegayaa inaan hada isticmaalayo nooca 2.2 ee goobahan mana jiraan wax dhibaato ah oo lumisa xogta maxaa yeelay waxaa jira casharo ku saabsan sida loo badbaadiyo nooca hada jira loona soo kabsado.
Aad ayaad u mahadsantahay jrlafaurie runtu waxay tahay, ma aanan helin noocyada xasilloon ee Firefox OS 2.0 ee Alcatel One Touch Fire.
Waxaan kuu sheegayaa inaan ku helay casharradii Mozilla oo ay la socdaan sawirro saldhigyo rasmi ah oo deggan.
Muuqaalka salka v18D.zip. Hoos waxay ku sharxayaan sida loo rakibo Firefo OS 2.O.
Kama shaqeynayo Alcatel-kayga maxaa yeelay sawirrada ay sameeyeen Mozilla taageero uma hayaan Alcatel One Touch Fire. Si aad ula qabsato sawirradan waa inaad adigu u abuurtaa qalabkaaga aan la taageerin.
Xidhiidhadaas oo aan geliyay faalladayda hore waa kuwa aan u adeegsado cusbooneysiinta taleefankayga maxaa yeelay, sidaad u leedahay, kuwa mozilla uma shaqeeyaan tan maxaa yeelay iyagu ma taageeraan, sidoo kale boggagaas badanaa vegnuxmod oo ah kan OEM-yada xasilloon waxaan ku iibsaday taleefankayga Venezuela haddana waxaan haystaa 1.3 xasilloon oo ka socota Venezuela oo si fiican u shaqeeya
Adf.ly? , maxaan u nimid
Hadda waxaad soo iibsatay Samsung Galaxy mini S5 waxaanan jeclaan lahaa inaan ku tijaabiyo Firefox OS mobilkaan, wixii talo bixin ah ee ay tahay inaan tixgeliyo ???
hello xaaskeyga ayaa heysata taleefanka gacanta laakiin leh android. haddii aan taabto, way i dishaa ... ma ogid haddii lagu rakibayo tallaabooyinkaas kiniin?
La heli karo Mageia 5